Iqela le-PIVX liyayiphakamisa | PIVX
Hayi kukho wonke umntu, @FusedHelios apha. Ndineendaba ezimnandi. Izinto ezimbalwa ngokwenene.
Izinto zokuqala kuqala, sizongeze zonke iividiyo zethu kwisitya esitsha se-Facebook esingasifumana apha: https://www.facebook.com/PIVXClass Plus sinayo i-akhawunti entsha ye-Twitter Ngokukhawuleza kwisiteshini kwaye sihlaziywe ngeenxa zonke . Ungayifumana apha: https://twitter.com/PIVX_Class
Ngokwabo, zombini ezi zinto ziza kuba zipholile, kodwa isizathu esenzayo ngoku ngokukhethekileyo kukuba siqala ukukhupha ukukhushulwa kwisiteshi. Njengengxenye yesiphakamiso sethu sokugqibela, siye sagxotha i-100 PIV ngenyanga ukuze sisetyenziselwe inkxaso yokuxhasa. Eyona … sinako iinyanga ezi-4 ezifanelekileyo ngoku, wenza izibalo. Isitishi siye soloko siba sisixhobo kubantu abatsha bekhontrakthi. Nangona ndiyakuthanda abafana bebukele kwaye bebeka izimvo kwiividiyo, ininzi yenu sele niyazi iimpendulo zemibuzo esiyikhulayo. Olu phuhliso lufanele luhambe ngendlela ende ukuze usibeke phambi kombukeli olungileyo! Kodwa, ngelixa uchitha imali yokupapasha kunceda kakhulu, kuhamba ngakumbi nangaphezulu kunye nenkxaso yoluntu. Ndenzele inceba kwaye qi niseka ukuba wabelane ngamavidiyo kwiiveki ezizayo.
Akunjalo konke, ndingathanda kwakhona ukuvakalisa ukuba sibuyisela i-original PIVX Basics inkomo yokuqala ye-primer. Isiteshi sele siphucule kakhulu njengoko saqala ukuqala kwaye ndicinga ukuba silungele ukwenza i-PIVX Basics entsha kunye nephuculweyo. Sinezinye iinguqulelo zokuguqulela, ingcali yezandi zengcali, izixhobo ezingcono, kwaye andiyiyo njengekhamera. Konke oku kwenza ukuphucula okukhulu. Ividiyo yokuqala yokuhlaziywa iza kuqala kwiiveki ezimbalwa kwaye ziya kukhutshwa enye ngeveki de kubekwe uchungechunge. Ndiza kubambelela kwezinye zezohlahlo lwabiwo-mali lokusebenzisa kuphela kwezo vidiyo. Ziza kuba ezinye zezona zinto zisebenzisekayo kubasebenzisi abatsha, ngoko kuqondakala kuphela.
Okokugqibela, i-PIVX Class yakamuva iphume! Ndilibazisekile ngosuku ngalunye ukuqinisekisa ukuba onke amadada ethu ahlanganiswe namaphepha amaphephandaba omtsha. Ndiyathetha ngokumahluko phakathi kwee-cashptocurrency zemali kunye neetekki njengoko kubonakala ngathi uluntu jikelele lubujonga. Uphando lubonisa imibono eyahlukileyo, kodwa impazamo eyintloko kubantu abaninzi kukuba ingaba ihamba kwiBlockchain yabo okanye ngaphezulu kwechungechunge lenye yemali. Yijonge:
Ndiyabonga abafana ukuxhasa i-PIVX Class. Ndiyathemba ukuba olu phuhliso lwakutshanje kunye nombono okhoyo wamgangatho wesiteshi sele wenze wonwabile. Ngoku ukuba sakhe ikhathalogu yevidiyo kwaye senza iindlela ezininzi zokufumanisa, sinokuzikhupha kwihlabathi. Dlulela iminwe yakho!